ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲကအတိုင်း စာကြည့်စားပွဲလေးကို အလှဆင်ကြမယ်
10 Apr 2018 . 4:23 PM
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကျောင်းသားပဲဖြစ်စေ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေ ကိုယ့်ရဲ့ စာကြည့်စားပွဲလေးကို “ဒါဟာ စာအုပ်တွေတင်ထားတဲ့ စားပွဲတစ်ခု၊ အလုပ်ဖိုင်လ်တွေထင်ထားတဲ့စားပွဲ သက်သက်ပဲ” လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေတင်ထားပုံထားလို့ရတဲ့ စားပွဲတစ်ခုဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ စာတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ပြီးအောင် အာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ တွေးထားမိတဲ့ စားပွဲတစ်ခုသက်သက်ထက် အများကြီး တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ဒီလို တန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကို အားလုံးက ဖြစ်သလို ပစ်ထားကြပါတယ်။ အင်တာနက်က ပုံလေးတွေတွေ့ရင်တော့ အားကျကြပြီး တကယ်တမ်းကိုယ့်ရဲ့ စာကြည့်စားပွဲကို စိတ်ကူးထဲကပုံစံအတိုင်း ပုံမဖော်ဖြစ်ကြပါဘူး။ ချက်ချင်းထမလုပ်ဖြစ်တာကြောင့်နဲ့၊ ဘယ်လို စလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို မသိကြလို့ပါ။
အခု နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသင့်အနေအထားမြင့်တဲ့ စားပွဲကို အရင်ဆုံး ၀ယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်အသေအချာအာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့က စားပွဲအမြင့်က ကိုယ်ရဲ့လက်တံတောင်ဆစ် ပုံမှန်အနေအထားတင်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာ ရှိနေသင့်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ပိုပြီး မြန်မြန်နဲ့ မှန်မှန် စာလည်း ကျက်နိုင်မှာဖြစ်သလို အလုပ်လည်း ပြီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကော်စားပွဲနဲ့ သံစားပွဲတွေကို မဝယ်ဖို့ တားမြစ်ပါရစေ။ သစ်သားစာကြည့်စားပွဲသာ ပိုတာရှည်ခံပါတယ်။
အများက သိကြတာတော့ စာအုပ်ထောက်တံ (Book End) လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်လေးတွေကို ထောင်ရက်ထားထားပြီး အစဘက်နဲ့ အဆုံးဘက်ကြားမှာ ညှပ်ထားလို့ရပါတယ်။ မဖြစ်မနေဖတ်ရမယ့် စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်စိရှိမှာ ရှိနေမှဖြစ်တဲ့ အရေးတကြီး ဖိုင်လ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ A4 ပုံးထဲ ဖြစ်သလို မထည့်ပါနဲ့တော့နော်။ အဲဒီအစား Book End လေးတွေ၊ Book Holder လေးတွေ စားပွဲပေါ်မှာထားပြီး စီစီရီရီနဲ့ တင်ထားပါ။ မျက်စိရှင်းပြီး ကိုယ်လိုတဲ့အခါ အချိန်မရွေးရှာလို့ရနိုင်သွားပါတယ်။
စာကြည့်စားပွဲအနီးတစ်ဝိုက်မှာ Notice Board တစ်ခုထားရှိပေးပါ။ Notice Board ဆိုတာ ကတ်ထူပြားအချပ်အကြီးပေါ်မှာ Pin လေးတွေနဲ့ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ၊ ကိုယ်မှာစရာရှိတဲ့ Notes လေးတွေကို စိုက်ထားလို့ရတဲ့ Board လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထားခြင်းက ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေကို Notebooks ပေါင်းစုံမှာ ရှုပ်ပွနေအောင်မှတ်နေစရာမလိုတော့ဘူးလေ။
စာရေးကိရိယာတွေ စာအုပ်တွေရော၊ Notes တွေရော စုပြုံပြီး ထားမလို့လား? အဲဒီလိုဆိုရင် မျက်စိရှုပ်ပြီး အာရုံစိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးနော်။ ဒီအတွက် ကိုယ်စာကြည့်စားပွဲရဲ့ နံရံမှာ Stationary Stand အသေးလေး ရိုက်ပြီးတင်ထားလိုက်ပါ။ စာရေးကိရိယာလေးတွေကို အဲဒီ Stand လေးပေါ်တင်ထားပြီး လိုတဲ့အချိန်လောက်မှ ထယူပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် စားပွဲပေါ်မှာ မျက်စိလည်း ရှုပ်မနေတော့ဘူး။ ကိုယ့်စားပွဲက သပ်ရပ်ပြီး လှပနေမှာ။
စာအုပ်တွေရော၊ စာရေးကိရိယာနဲ့ Notes တွေ အားလုံးကို ရှင်းပြီးသွားရင်တော့ စားပွဲပေါ်မှာ ရှင်းပြီးသလောက်ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဘာမှ ကျန်တော့မယ်မထင်ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်ကျရင် ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့စာ (သို့) လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်ကိစ္စကိုသာ အာရုံစူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့ လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုပြောပြပေးချင်တာကတော့ Additional Tips လေးပါ။ စာလုပ်တဲ့အခါ၊ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အိပ်ငိုက်တတ်တဲ့သူတွေရှိခဲ့ရင် စားပွဲပေါ်မှာ ချိုချဉ်ဘူးအသေးလေးနဲ့ စားပွဲတင်စိုက်လို့ရနိုင်တဲ့ အပင်လေးကို ထားထား ပေးပါ။ အပင်လေးကထုတ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်လေးက အိပ်ချင်တဲ့စိတ်ကို ဖြေဖျောက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကိုလည်း အာရုံစိုက်မှုပိုကောင်းအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယျ့စိတျကူးထဲကအတိုငျး စာကွညျ့စားပှဲလေးကို အလှဆငျကွမယျ
ကိုယျကိုယျတိုငျ ကြောငျးသားပဲဖွဈစေ၊ အလုပျလုပျကိုငျနတေဲ့သူပဲဖွဈနပေါစေ ကိုယျ့ရဲ့ စာကွညျ့စားပှဲလေးကို “ဒါဟာ စာအုပျတှတေငျထားတဲ့ စားပှဲတဈခု၊ အလုပျဖိုငျလျတှထေငျထားတဲ့စားပှဲ သကျသကျပဲ” လို့ သတျမှတျကွပါတယျ။ ပစ်စညျးတှတေငျထားပုံထားလို့ရတဲ့ စားပှဲတဈခုဟုတျပမေယျ့ ကိုယျ့ရဲ့ စာတှေ၊ ကိုယျ့ရဲ့ အလုပျတှကေို တဈနရောတညျးမှာ တဈထိုငျတညျးနဲ့ပွီးအောငျ အာရုံစူးစိုကျနိုငျအောငျလုပျပေးတဲ့ နရောလေးတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ တှေးထားမိတဲ့ စားပှဲတဈခုသကျသကျထကျ အမြားကွီး တနျဖိုးရှိပါတယျ။
ဒီလို တနျဖိုးရှိတဲ့နရောလေးတဈခုကို အားလုံးက ဖွဈသလို ပဈထားကွပါတယျ။ အငျတာနကျက ပုံလေးတှတှေရေ့ငျတော့ အားကကြွပွီး တကယျတမျးကိုယျ့ရဲ့ စာကွညျ့စားပှဲကို စိတျကူးထဲကပုံစံအတိုငျး ပုံမဖျောဖွဈကွပါဘူး။ ခကျြခငျြးထမလုပျဖွဈတာကွောငျ့နဲ့၊ ဘယျလို စလုပျရမယျဆိုတာကို မသိကွလို့ပါ။
အခု နညျးလမျးတှကေို ပွောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အသငျ့အနအေထားမွငျ့တဲ့ စားပှဲကို အရငျဆုံး ဝယျဖို့လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျအသအေခြာအာရုံစူးစိုကျနိုငျဖို့က စားပှဲအမွငျ့က ကိုယျရဲ့လကျတံတောငျဆဈ ပုံမှနျအနအေထားတငျလို့ရတဲ့အနအေထားမှာ ရှိနသေငျ့ပါတယျ။ ဒါမှလညျး ပိုပွီး မွနျမွနျနဲ့ မှနျမှနျ စာလညျး ကကျြနိုငျမှာဖွဈသလို အလုပျလညျး ပွီးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ကျောစားပှဲနဲ့ သံစားပှဲတှကေို မဝယျဖို့ တားမွဈပါရစေ။ သဈသားစာကွညျ့စားပှဲသာ ပိုတာရှညျခံပါတယျ။
အမြားက သိကွတာတော့ စာအုပျထောကျတံ (Book End) လေးတှဖွေဈပါတယျ။ စာအုပျလေးတှကေို ထောငျရကျထားထားပွီး အစဘကျနဲ့ အဆုံးဘကျကွားမှာ ညှပျထားလို့ရပါတယျ။ မဖွဈမနဖေတျရမယျ့ စာအုပျပဲဖွဈဖွဈ မကျြစိရှိမှာ ရှိနမှေဖွဈတဲ့ အရေးတကွီး ဖိုငျလျတှပေဲဖွဈဖွဈ အလှယျတကူ A4 ပုံးထဲ ဖွဈသလို မထညျ့ပါနဲ့တော့နျော။ အဲဒီအစား Book End လေးတှေ၊ Book Holder လေးတှေ စားပှဲပျေါမှာထားပွီး စီစီရီရီနဲ့ တငျထားပါ။ မကျြစိရှငျးပွီး ကိုယျလိုတဲ့အခါ အခြိနျမရှေးရှာလို့ရနိုငျသှားပါတယျ။
စာကွညျ့စားပှဲအနီးတဈဝိုကျမှာ Notice Board တဈခုထားရှိပေးပါ။ Notice Board ဆိုတာ ကတျထူပွားအခပျြအကွီးပျေါမှာ Pin လေးတှနေဲ့ ကိုယျလုပျစရာရှိတာ၊ ကိုယျမှာစရာရှိတဲ့ Notes လေးတှကေို စိုကျထားလို့ရတဲ့ Board လေးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုထားခွငျးက ကိုယျလုပျစရာရှိတာတှကေို Notebooks ပေါငျးစုံမှာ ရှုပျပှနအေောငျမှတျနစေရာမလိုတော့ဘူးလေ။
စာရေးကိရိယာတှေ စာအုပျတှရေော၊ Notes တှရေော စုပွုံပွီး ထားမလို့လား? အဲဒီလိုဆိုရငျ မကျြစိရှုပျပွီး အာရုံစိုကျနိုငျမှာ မဟုတျတော့ဘူးနျော။ ဒီအတှကျ ကိုယျစာကွညျ့စားပှဲရဲ့ နံရံမှာ Stationary Stand အသေးလေး ရိုကျပွီးတငျထားလိုကျပါ။ စာရေးကိရိယာလေးတှကေို အဲဒီ Stand လေးပျေါတငျထားပွီး လိုတဲ့အခြိနျလောကျမှ ထယူပါ။ ဒီလိုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ စားပှဲပျေါမှာ မကျြစိလညျး ရှုပျမနတေော့ဘူး။ ကိုယျ့စားပှဲက သပျရပျပွီး လှပနမှော။
စာအုပျတှရေော၊ စာရေးကိရိယာနဲ့ Notes တှေ အားလုံးကို ရှငျးပွီးသှားရငျတော့ စားပှဲပျေါမှာ ရှငျးပွီးသလောကျဖွဈသှားမှာပါ။ ဘာမှ ကနျြတော့မယျမထငျပါဘူး။ အဲဒီအခြိနျကရြငျ ကိုယျလုပျစရာရှိတဲ့စာ (သို့) လုပျစရာရှိတဲ့ အလုပျကိစ်စကိုသာ အာရုံစူးစူးစိုကျစိုကျနဲ့ လုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အခုပွောပွပေးခငျြတာကတော့ Additional Tips လေးပါ။ စာလုပျတဲ့အခါ၊ အလုပျလုပျတဲ့အခါ အိပျငိုကျတတျတဲ့သူတှရှေိခဲ့ရငျ စားပှဲပျေါမှာ ခြိုခဉျြဘူးအသေးလေးနဲ့ စားပှဲတငျစိုကျလို့ရနိုငျတဲ့ အပငျလေးကို ထားထား ပေးပါ။ အပငျလေးကထုတျတဲ့ အောကျဆီဂငျြလေးက အိပျခငျြတဲ့စိတျကို ဖွဖြေောကျပေးပါလိမျ့မယျ။ စိတျကိုလညျး အာရုံစိုကျမှုပိုကောငျးအောငျ ဖနျတီးပေးနိုငျပါတယျ။